musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Flights to AlUla from Dubai and Kuwait on flynas now
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kuwait Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Flynas inotanga ndege dzekutanga dzepasi rose kuenda kuAlUla.
Ndege yekutanga kuenda kuAlUla ichavhurwa munaNovember 19, 2021, kubva kuDubai International Airport panguva yemhemberero yakakosha ichapemberera nhoroondo uye nhaka yeAlUla uye kusimudzira maflynas 'anohwina mubairo mafambiro ekufambisa ndege.
Kubva muna Mbudzi 19, 2021, nzira dzekutanga dzepasi rose kupinda muAlUla dzichasimuka kubva kuDubai neKuwait.
Kubhururuka kwekutanga munaNovember 19 kwakarongwa kuti ienderane nechiitiko chinotevera chemimhanzi paMaraya.
Faia Younan, mudiki soprano nebhendi rake remhando yepamusoro vacharidza vachigara kuMaraya pazuva rimwe chetero.
Flynas, mutakuri wendege yenyika yeSaudi uye ari kutungamira ndege dzinodhura zvakanyanya kuMiddle East, yazivisa kuwedzera kwayo kwekupedzisira kwendege kusanganisira yekutanga ndege dzepasi rose dzakananga kuAlUla International Airport.
Kutanga kubva ku19th Mbudzi 2021, nzira dzekutanga dzepasi rose kupinda muAlUla dzichasimuka kubva Dubai uye Kuwait. Nzira dzemumba dzakawedzerwa sechikamu chekuwedzera dzinosanganisira Riyadh, Dammam neJeddah. Chiziviso chinocherekedza kekutanga kuti vafambi vepasirese vafarire mukana wakananga kune imwe yenzvimbo dzakakosha dzekuchera matongo uye nhoroondo dzepasirese.
Ndege yekutanga kuenda kuAlUla ichavhurwa musi wa19th Mbudzi 2021, kubva Dubai International Airport panguva yemhemberero yakakosha iyo ichapemberera nhoroondo uye nhaka yeAlUla uye kusimudzira flynas' anohwina mubairo-anohwina mafambiro endege.
Vachitaura nezve chiitiko ichi, CEO pa flynas VaBander Almohanna vakati, “Tinofara kuita kuti AlUla iwanike nyore kune vese vanofamba munharaunda iyi, nzvimbo yakasarudzika uye isingakundikani kufadza kunyangwe vafambi vane ruzivo rwakanyanya. Akazowedzera kuti, "Tine chivimbo chekuti kubatana kwedu neRoyal Commission yeAlUla kuchave chimwe chezvinhu zvakawanda zvichabatsira mukuzadzisa zvinangwa zveSaudi Vision 2030 kusimudzira chinzvimbo cheHumambo senzvimbo inotungamira yekushanya kwedunhu nepasirese."
Phillip Jones, Chief Destination Management uye Marketing Officer weRoyal Commission yeAlUla (RCU) akati, "Kwezviuru zvemakore, AlUla yanga iri mharadzano yebudiriro. Yedu yekare oasis yakatambira vafambi uye vagari kuti vagovane zvigadzirwa, mazano uye kuvaka nharaunda. Nhasi chiitiko chikuru cheAlUla sezvo tichave zvakare munzira yevafambi vekunze. Vashanyi vanogona kusvika zvakananga kuAlUla nendege dzeflynas dzakananga kubva kuDubai neKuwait isu tinotarisira kuunza vashanyi vazhinji kune monumentality yekwavaende. "
Ndege yekutanga pa19th Mbudzi yakarongwa kuti ienderane nechiitiko chinotevera chemimhanzi paMaraya. Faia Younan, mudiki soprano nebhendi rake remhando yepamusoro vacharidza vachigara kuMaraya pazuva rimwe chetero.
Chirongwa chendege dzepasirese uye dzepamba kubva/kuenda kuAlUla dzichave:
4 vhiki nendege nendege pakati peAlUla neRiyadh
3 vhiki nendege nendege pakati peAlUla neDubai
3 vhiki nendege nendege pakati peAlUla neJeddah
3 vhiki nendege nendege pakati peAlUla neDammam
2 vhiki nendege ndege pakati peAlUla neKuwait
Nechiitiko chitsva ichi, flynas inodzokorora kuzvipira kwayo kupa inoyevedza uye-inodiwa sarudzo dzekuenda dzinosangana nezvinotarisirwa nemutyairi. Pamusoro pezvo, flynas inotsvaga kufambirana nekukura kuri kuita indasitiri yekufambisa uye yekushanya iyo inotarisirwa kupupurira kudzokororwa kukuru muchikamu chiri kuuya sezvo nyika dziri kuramba dzichipora kubva kune zvisati zvamboitika zvedenda reCOVID-19.